नेकपामा लेबी रकम जम्मा गर्न एउटै खाता खाेलिने – Everest Dainik – News from Nepal
नेकपामा लेबी रकम जम्मा गर्न एउटै खाता खाेलिने
काठमाडौँ, माघ २० गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विगतमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका सांसदहरूले बुझाइरहेको लेवी अब एउटै संयुक्त खातामा बुझाउने भएका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ ३ गते एकीकरण भएर नेकपा भएयता पनि ती दलका सांसदहरूले आआफ्नै पूर्व पार्टीमा लेवी बुझाउँदै आएका थिए ।
पार्टीले हालसम्म संयुक्त खाता नदिएका कारण छुट्टाछुट्टै लेवी बुझाइरहेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
याे।समाचार सुरेशकुमार यादवले गाेरखापत्र दैनिकमा लेखेका छन् ।
“नेकपाको संसदीय दलबाट एउटा संयुक्त खाता माग भएको छ, । खाता पठाउने वित्तिकै दलका सम्पूर्ण सांसदको लेवी एउटै खातामा जान्छ ।”
पार्टीका शीर्ष नेतासँग पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै गुरुङ्ले एकीकृत पार्टीको खाता चाँडै आउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
पार्टी एकीकृत भए पनि दुईवटै पार्टीको लेवी फरक फरक रहेको छ । अहिले पूर्वएमालेका प्रतिनिधिसभाका सांसदले मासिक रु. १३ हजार र मन्त्रीले रु. १५ हजार लेबी बुझाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, पूर्वमाओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभाका सांसदले मासिक रु. १२ हजार र मन्त्रीले रु.१५ हजार बुझाउने गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिनुभयो । एउटै खातामा जान थालेपछि लेबीमा पनि एकरूपता हुने सचेतक गुरुङले बताउनुभयो । सांसद तथा मन्त्रीको लेबी संसद् सचिवालयको लेखाबाट नै काटिन्छ ।
सचेतक गुरुङका अनुसार सांसदले पाउने मासिक तलब र अन्य सुविधा दिँदा संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले लेबी काटेर दिने गरेको छ । त्यो लेबी पार्टीको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि पार्टीले सांसदहरूको नामावली पठाएर तोकेको रकम अनुसार लेबी काट्न आग्रह गरेपछि लेखाले सोही अनुसार कटाएर दिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले लेबी एउटै खाता बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको तर सङ्गठनको तल्लो तहसम्म एकीकरण टुङ्गो नलागेका कारण ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
“हाललाई छुट्टा छुट्टै खाताबाट कारोबार भइरहेको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, संयुक्त खाता चाँडै नै खुल्छ ।”
ट्याग्स: नेकपा, लेबी